Nin si caqliyeysan ula baxsaday Gaari malaayin doolar ku fadhiya | Baahin Media
Nin si caqliyeysan ula baxsaday Gaari malaayin doolar ku fadhiya
Nin fursad raadis ah ayay u suuragashay in uu la baxsado gaari Ferrari ah oo qiimahiisa lagu sheegay 2.2 milyan oo doolarka Maraykanka ah.
Ninkan laga shakisan yahay ayaa iska dhigay in uu danaynayo gadashada gaarigaas oo noociisu yahay 1985 Ferrari 288 GTO, sida ay sheegeen booliiska magaalada Düsseldorf ee waddanka Jarmalka.
Qofkan la doon doonayo ayaa soo gaaray goobta baabuurta lagu iibiyo, labo saacadood kaddib, waxaa fursad loo siiyay inuu tijaabiyo gaariga.
Balse markii uu dibadda goobta soo istaagay ninkii ka gadi rabay ayaa waxaa uu si degdeg ah ula baxsaday gaariga, markii dambena waxaa isla gaarigii lagu arkay goob baabuurta lagu hagaajiyo.
Website soo bandhiga baabuurta ayaa sheegay in gaarigan noociisa oo kale uu mar lahaan jiray nin ka qeyb gali jiray tartanka baabuurta ee Formula 1, kaasoo lagu magacaabo Eddie Irvine, isagoo tartanka u isticmaali jiray sannadihii 1996-kii iyo 1999-kii.
Baabuurkan ayaa qiimo ka badan 3 milyan oo doolar ka joogaa dalka Mareykanka, waxaana baabuurta loo sameeyaa suuq geyn gaar ah.
Gaariga uu ninkan la baxsaday ayaa si weyn looga daneyaa tartamada adduunka ee baabuurta, waxaana laga helay goob baabuurta lagu hagaajiyo oo lagu qariyay magaalada Grevenbroich, oo aan sidaas uga fogeyn meeshii laga xaday markii booliska ay dadweynaha ku wargeliyeen dhacdada.
Booliska Jarmalka ayaa baahiyay sawirka nin la sheegay in uu joogay goobta markii lala baxsanayay Gaariga.
Lahaanshaha sawirkaPOLIZEI DUSSELDORF
Image captionBooliska Jarmalka ayaa baadi goobaya ninka lala xiriiriyay xatooyada baabuurka
Agaasimaha guud ee goobta lagu iibiyo baabuurta Bernhard Kerklo ayaa wargeys kasoo baxa Jarmalka u sheegay in ninkan uu muddo toddobaadyo ah soo dirayay farriimo Email ah oo badan isla markaasna dhowr jeer uu soo wacay.
Mr Kerklo ayaa sidoo kale u sheegay wargeyska in baabuurka uu ahaa mid qaali ah oo aanan lagu iibin suuqyada ku yaalla halkaasi.
Waxaa uu intaasi ku daray in noocyada gaarigan ay ka iibiyeen si weyn loo yaqaano, uuna yahay nooca kaliya ah ee kamidka ah 272-da Ferrari 288 GTO ee lasoo saaray.